Siiraa Archives - Page 4 of 4 - Ibsaa Jireenyaa
August 23, 2019 Sammubani One comment
Hojii Tiikaa irratti Bobba’uu
Nabiyyiin (salallahu aleyh wassalam) erga akaakayyuun isaa du’ee booda abbeeraa isaa, Abu Xaalib jalatti guddifamu fi kunuunfamu jalqabe. Abu Xaalib nama galiin isaa xiqqaa ta’eedha. Nabiyyiin abbeeraa isaa kana gargaaruf tiiksee ta’uun hoolota eege. Nabiyyiin (SAW) isaa fi nabiyyoonni isaan dura darban hoolota akka tiiksan ni beeksiisa. Inni warra Makkaatiif yeroo ijooollummaa hoolota tiiksaa ture. Haqa isaas (mindaa) abbaa hoolotaa irraa ni fudhata. Hadiisa sahiih ta’ee keessatti Ergamaan Rabbii (SAW) akkana jedhan: “Rabbiin nabiyyi hin ergine, hoolota kan tiikse yoo ta’ee malee.” Sahaabonni (namoonni nabiyyi waliin turanii fi amanan) ni jedhan, “Atillee moo?” Nabiiyyinis ni jedhe, “Eeti! Warra Makkaatiif Qaraarixa irratti tiiksafii ture.” Sahiih Al-Bukhaari 2262